Madaxweyne Farmaajo oo shir albaabadu u xiran yihiin la leh Waxgaradka Cadaado - Ceelhuur.com | Ceelhuur.com
Home » Wararka Galmudug » Madaxweyne Farmaajo oo shir albaabadu u xiran yihiin la leh Waxgaradka Cadaado Date :January 16, 2018 Author :admin 630 views
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shalay galab soo gaaray Magaalada Cadaado ayaa shir albaabadu u xiran yihiin xarunta Madaxtooyada Cadaado kula leh waxgaradka Cadaado. Madaxweynaha oo la filayay inuu saaka u safro Dhuusamareeb ayaa waxaa dib u dhac ku yimid safarkiisa.
Waxaana Shirkaan oo saxaafadda dibad joog ka tahay u muuqdaa mid xasaasi ah, ilaalada Madaxweynaha ayaa banaanka u saaray Saxaafadda, waxaana Madaxweynaha shirka ku wehliya Senator Abshir Bukhaari iyo Senator Cabdi Qeybdiid. Bulshada Cadaado ayaa si weyn uga soo horjeeda heshiiskii Ahlu sunna iyo Galmudug, iyagoo u arka inuu dhinac u raran yahay.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa la filayaa inuu markii uu shirkaan ka baxo oo shir gudoomiyo golaha Wasiirada Dowlad goboleedka Galmudug, isagoo ka dhageysan doona xaalada deegaanada iyo qorshayaasha maamulka Galmudug. Galabta ayaa la filayaa inuu Madaxweynuhu u safro Dhuusamareeb.
Ammaanka Magaalada Cadaado ayaa aad loo adkeeyey, waxaana Magaalada laga dareemayaa jawi siyaasadeed, wixii ku soo kordha kala soco ceelhuur.com